Izimbhedlele ziyi-necrosis ejulile noma engenazo izicubu ezingenayo, ehlala ngaphakathi ngaphakathi. Ngokuvame ukwakhiwa lapho ukuhlinzeka ngegazi kwamathambo nesikhumba kuphazanyiswa ngenxa yokuthi imithwalo encane yegazi iphulwa ngaphansi kwengcindezi, futhi konke lokhu kuholela ekutheni ama-tissue aphelile. Izindlala zokulala zivame ukuvela endaweni ye-scapula, amahlumela agqamile, ama-elbows kanye ne-sacrum. Kulesi sihloko, sizocubungula amakhambi omuntu wokwelashwa kwe-decubitus.
Amakhambi omphakathi ama-decongestants.
Amafutha e-Sea buckthorn.
Le ndlela yokwelashwa ingenye yezinto ezilula. Ama-bedsores adinga kuphela ukugcoba ngamafutha e-sea buckthorn. Leliyela linomphumela omuhle kakhulu.
Ukwenza amafutha okususelwa ku-resine resin, i-100 g ye-bexis, i-1 isipuni yamafutha wezipuni, i-pine grease kuze kube ngu-10 g, no-2 wezipuni ukhilimu we-bhotela. Ukuze ulungise amafutha, udinga ukukhomba nokupholisa amafutha emifino kuya ku-70 ° C, engeza kuso ibhotela, u-wax kanye ne-pine gum. Hlanganisa zonke izithako ekubhaleni kwamanzi kuze kube yilapho i-wax iyancibilika futhi iba yindoda ehambisanayo. Ukuze ulondolozwe amafutha, kufanele ugcinwe endaweni emnyama, ebandayo, futhi ngaphambi kokuwusebenzisa, udinga ukufudumala ebhodini lokugeza.
Ukwelapha i-decubitus, isikhumba kufanele siphathwe nge-hydrogen peroxide futhi somiswe nge-swab yekotini. Emva kokubeka amafutha, indawo ethintekile evela phezulu kufanele ihlanganiswe ne-cellophane kanye neshekhi noma isikhafu. I-compress inconywa ukuba igcinwe usuku olulodwa, bese-ke, uma kudingeka, amanxeba kufanele ahlanzwe futhi i-compress entsha kufanele isetshenziswe kabusha. Uma usebenzisa le ndlela yokuphulukisa ukulala, badlula ngokushesha kakhulu. Ukuze ugweme ukubukeka kwemifucumfucu, ikhasi elilodwa kufanele lihlanjululwe nekhilimu lomntwana. Le ndlela yokwelapha ingasetshenziselwa izilonda, izilonda ezingelaphi ukuphulukisa nokushisa.
Amafutha asuselwa ku-arnica ne-hemlock.
Ukuze ulungise amafutha, udinga ukubeka imbewu eluhlaza ye-hemlock emgodini weglasi ukuze kube khona ibanga elincane emaphethelweni. Ngemva kwalokho, isitsha kumele sigcwaliswe ngamafutha aphuzi noma amafutha omnqumo. Kunconywa ukuphoqelela lesi sivivinyo kuze kube yizinsuku ezingu-40. Ngaphezu kwalokho, udinga ukulungiselela kusuka ezimbali zamafutha we-arnica. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuxuba u-250ml wehlobo ngalunye lamafutha, 200 g we-bexisi, amagremu angu-100 kagamu kanye no-20 g we-propolis. Zonke izingxenye kumele zithembeke ekugezeni umusi, ngenkathi zixuba kakhulu. Ukuvumelana kwamafutha kufanele kube lula. Ukuphila kweshefu - kuze kube unyaka owodwa. Le mafutha angagcoba ubuso, i-fistula, amanxeba, ukushisa, izilonda, izilonda zomshoshaphansi, izigaxa ze-varicose kanye nokuphahlazeka. Ngesikhathi esifushane, le remedy folk izokusiza ukuphulukisa amanxeba futhi unciphise ukuvuvukala.
Okokuqala, sidinga ukuxuba ama-bulb amabili aqoshiwe emabhokisini amabili e-koqweqwe lwawo anezipuni ezimbili zamafutha zemifino, bese ubumba ingxube emlilweni kuze kube yimaminithi angu-20. Khona-ke, khetha umnsalo ngomsindo bese uwuhlupha. Umbala we-anyanisi kufanele ube segolide ngombala. Okulandelayo, anyanisi kufanele ancibilike emgqeni we-wax wemvelo noma ngamafutha, bese uthele umxube ophumela embizeni. Indlela enjalo ethandwayo yokwelashwa isetshenziselwa ukugcoba izindawo ezinomthelela kanye nezindawo ezithintekile.
Ngokuvamile, njengendlela yokwelapha lesi sifo, sebenzisa udoti lwezinkuni. Udinga ukuthola isitshalo esibolile, uthele yonke imfucuza kuyo, bese uyomisa bese uyagaya ku-grinder yekhofi. Ngemuva kwalokho, hlanganisa i-glycerin ngamanzi ngo-1: 1 ubukhulu, bese ugeza ingxube elandelayo nalabo abathintekile lapho kutholakala khona ukulala. Uma umzimba unomile, ungafafaza u-bedsores ngothuli lwezinkuni. Le ndlela yokwelapha kufanele isetshenziswe nsuku zonke. Ngemuva kwezinsuku ezintathu, izilonda ezicindezelayo ziqala ukunyamalala. Lapho ukwelashwa kwe-diaper ukuqhuma, le ndlela yokwelashwa ingasetshenziswa futhi, iyasebenza kakhulu.
Amafutha omama nama-calendula.
Ngokuba amafutha okupheka, udinga ukuthululela amafutha e-sunflower fresh marigold izimbali futhi ufune izinyanga ezingu-1-2. Emva kokudinga ukucindezeleka. Okokuqala, isisombululo somama sisetshenziselwa ukwelapha amanxeba, futhi ngemva kokumisa, izingxenye ezithintekile zomzimba zigcwala amafutha e-calendula.
Indlela yokusebenzisa amafutha wezinhlanzi ilula kakhulu. Enkomishini udinga ukuhambisa amafutha enhlanzi bese uyibamba ngaphansi kwesibani se-quartz okwesikhashana. Ngemuva kwalokhu, gcoba isikhumba somzimba oyinyumba kumanoni, bese unamathisela ekucindezelekeni okukhulu. Phezulu ngephepha lesikhumba nefilimu. Ukucindezela kushiywe ubusuku bonke. Ekuseni, isayithi kufanele ilashwe ngesisombululo se-manganese noma i-furatsilinom, futhi ngemva kokuba isilonda siseduze usule ne-camphor utshwala. Khona-ke, kusetshenziswe i-compress yamafutha enhlanzi. Ukuze izinyathelo zokuphumula ziphulukiswe, izinqubo ezinjalo kufanele zibe cishe eziyisithupha.
Uma unesifo sokulala, kunconywa ukuba ufafaze ngesitashi.
Beka isipuni 1 soda esibukweni bese uthele amanzi abilayo. Khona-ke isixazululo kufanele sithathwe ngendwangu yelineni bese ulinda kuze kube yilapho siphunga kancane. Khona-ke i-napkin kufanele icaciswe bese isetshenziselwa ukucindezeleka okukhulu. I-compress kuzodingeka ishintshwe izikhathi eziningana ngosuku, njengoba i-napkin izohlala ipus.
Aloe kanye celandine.
Hlanganisa isipuni 1 se-celandine juice nejusi le-aloe. Ngaphambi kwalokhu, ijusi kufanele ihlungwe kahle. Bese ufaka isipuni 1 soju. Gcina ingxube Kunconywa ku-glassware. Ingxube ehlanganisiwe kufanele ihambiswe ngamagciwane okucindezela cishe izikhathi ezimbili ngosuku.
Ukulungiselela: i-celandine kufanele idluliselwe nge-grinder ye-inyama, isebenzisa amagilavu, bese i-juice kufanele icaciswe ngaphandle kwe-gruel. Khona-ke, lapho ijusi seluqedile, ukukhanya kombala omnyama kuyoncipha. Kodwa sizodinga ukuhlanganisa ingxenye ehlanzekile yejusi, ngoba yilokho esizokusebenzisa esikhathini esizayo. Ukusebenzisa ijusi le-celandine kunconywa ngale ndlela: i-napkin kufanele ihambelaniswe ijusi bese igqoka endaweni ethintekile, futhi phezulu ihlanganiswe nephepha. Ekuqaleni kwenqubo, ukushisa kungenzeka, kodwa ubuhlungu buya. Emva kwezinsuku ezintathu ngokusebenzisa ikhambi elinjalo lomuntu, isikhumba esisha kufanele sifake.
Izimbali linden zokulahlekelwa isisindo
Ukwelashwa kwezifo zamehlo kubantu
Umthelela wokucindezeleka emzimbeni womuntu
AmaHiccups, izikhambi zabantu
Ukudla kuyingozi empilweni
Izinganekwane ezivame kakhulu mayelana nezingozi zefoni
Sithini isikhumba sethu?
Indlela yokuhlanganisa i-Lego Constructor
Izimo ZeSuku Lwazi-2017: imibono yohlu lwesikole kanye nemisebenzi enkulisa nelabhulali
Ifilimu ye-saumoni enezihlahla zomnqumo
Kuthiwani uma indodakazi yami isithandana nomdlali?
Isitshalo seqanda sivunwe
Ikhekhe le-chocolate nge hazelnut
Ukunqoba okulandelayo kukaKarl Lagerfeld eParis
Ishokoledi esinamahloni: ekhangayo futhi ewusizo!
Izimfihlo zokwenza isaladi esiphundu isaladi yaseShayina
Indlela yokukhula ngokushesha izinwele zakho